थाइल्याण्डकी राजकुमारीद्धारा क्षमा याचना - थाइल्याण्डकी राजकुमारीद्धारा क्षमा याचना
२०७५, १ फाल्गुन, 05:30:28 PM
एजेन्सी । थाइल्याण्डकी राजकुमारी उबोलरतनाले प्रधानमन्त्रीका लागि आफूले उम्मेदवारी घोषणा गर्नु गल्ती भएको भन्दै क्षमा याचना गरेकी छिन् । शाही परिवारको सदस्य रहेकै बेला ६७ वर्षीया उबोलरतनाले ‘थाई रक्षा चार्ट पार्टी’का तर्फबाट केही दिन अगाडी उम्मेदवारी घोषणा गरेकी थिइन् । उनको उम्मेदवारीका बारेमा उनका भाई तथा थाइल्याण्डका राजा माहा वाजिरालोङकोर्नले आपत्ति जनाएका थिए ।
आफ्नी ठूली दिदीले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको केही घण्टा नवित्दै राजाले राजपरिवारको सदस्य भएको व्यक्ति दलिय र सक्रिय राजनीतिमा संलग्न हुनु नमिल्ने धारणा राखेका थिए । राजपरिवारका सदस्यहरु राजनीतिमा सक्रिय हुनु संविधान, परम्परा, संस्कृति र संवैधानिक राजतन्त्रको मान्यता विपरित हुने राजाको भनाई थियो । राजाको आपत्तिपछि निर्वाचन आयोगले पनि उनलाई उम्मेदवार बन्न नमिल्ने भन्दै अयोग्य घोषणा गरेको थियो ।
राजापाक्षले आईफाकाे उपयाेग गरे, के प्रधानमन्त्री ओलीसँग त्यो सामर्थ्य छ ?
देशभर ४७ स्थानमा उपनिर्वाचन आवश्यक,रिक्त जनप्रतिनिधिको निर्वाचनकालागि सरकारले चासो दिएन
नेकपामा अन्तरविरोध : विधान स्पष्ट, राजनीतिक प्रतिवेदन गोलमटोल !
गुठी विधेयक विरुद्ध पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको गम्भीर चासो
समाजवादी पार्टी नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता, चुनाव चिह्न के ?